DHAGEYSO:- Cumar C/raxmaan oo ka warbixiyay shilkii ka dhacay magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DHAGEYSO:- Cumar C/raxmaan oo ka warbixiyay shilkii ka dhacay magaalada Muqdisho
Taliyaha ciidamada illaalada xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horeeysay ka warbixiyay xaaladda dad shacab ah oo dhawaan dhimasho iyo dhaawac kasoo gaartay gaadiid galbineysay madaxweyne Farmaajo.
Dadka shilkaasi ku dhintay ayaa waxaa ka mid ahaa Tahliil Jimcaale Hubane oo ka tirsanaa wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxaana xaaladda dadkii ku dhaawacmay warbaahinta si faah faahsan uga bixiyay taliyaha howlgalinta guutadda 60-aad ee ciidamada ilaaliya madaxtooyada Soomaaliya.
Taliyaha howlgalinta guurtadda 60-aad ee ciidamada ilaaliya madaxtooyada Soomaaliya Gaashaanle Dhexe Cumar C/raxmaan ayaa sheegay in si xun wax looga sheegay arrintaasi islamarkaana la buun-buuniyay.
Wuxuu taliyaha tilmaamay in marxuumka ehelkiisa iyo madaxweynaha ay kulmeen, islamarkaana haweeneydii ku dhaawacantay shilkaasi oo lagu magacaabo Faaduma Sahra ay haatan xaaladeeda caafimaadeed la wareegtay madaxtooyada Soomaaliya.
Dhinaca kale, taliyaha ayaa sheegay in sarkaalka waday gaariga shilka geystay oo lagu magacaabo C/shakuur Mursal Maxamed ay haatan gacanta ku hayaan, lana marsiin doonno sharciga.
Ugu dambeyn, wuxuu taliyaha sheegay inay been abuur tahay in dadka shilkaasi wax ku noqday ay dayacday dowladda federaalka Soomaaliya.